MULTISUB [မြွေဘုရင်] မြွေဘုရင်၏ပစ္စုပ္ပန်ဘေးအန္တရာယ်သည်လာဆဲဖြစ်ပြီး၊ မြွေအားလုံးသည်ဘဝမှသေခြင်းသို့ထွက်ပြေးနေကြသည်။ | Thriller / Adventure / Action | Corning / Chen Xinzhe / Shao Shuai | YOUKU MOVIE | 优酷电影
17 079 212 просмотров
【မြွေဘုရင် ake မြွေဘုရင်၏အစစ်အမှန်ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တော့မည် ဖြစ်၍ မြွေအားလုံးအသက်ရှင်။ သေကြလိမ့်မည်။ ၀ တ်စုံ / ဆိုင်းငံစိုင်း / လှုပ်ရှားမှု | Corning / Chen Xinzhe / Shao Shuai | YOUKU MOVIE | Youku Movies
exciting စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအကြောင်းအရာများကို ဦး စွာကြည့်ရှုရန်အသင်း ၀ င်အဖြစ် - http://bit.ly/youkumoviemembership
အမျိုးအစား: Thriller / Adventure / လှုပ်ရှားမှု
ဒါရိုက်တာ Chen Huanxiang
သရုပ်ဆောင်: Corning / Chen Xinzhe / Shao Shuai / Guo Zhen / Guo Jiayi / Shen Kai / Zhang Qi / Gao Zijian / Liu Yongqi / Zheng Liuzhi
နိဒါန်း - ရုပ်ရှင်သည်တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ၏သမိုင်းကြောင်းကိုပြောပြသည်။ စစ်ဘုရင်များသည်မီးရထားလမ်းဖောက်။ ဂေဟစနစ်ကိုသစ်တောပြုန်းတီး။ ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်မြွေများကိုလက်တုံ့ပြန်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မိုးသည်းထန်စွာရုတ်သိမ်းခြင်းတာဝန်နှင့်မြွေပန်းပွင့်၏ဇာတ်လမ်းကိုရှာဖွေရန်အဖွဲ့ငယ်တစ်ဖွဲ့ကို ဦး ဆောင်ရန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
# 优酷电影 #youkumovie # 蛇王 #kingofsnake
05:11 အဆိပ်အပြင်းဆုံးသောလျှာသည်တတိယတန်းသို့တက်သွားပြီး Ma Shao ၏ဘဝသည်စိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်သည်။
09:35 အကြမ်းဖက်အသိုင်းအဝိုင်းကရထားကိုဝိုင်းထားတယ်။ Mu Sheng ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်။
14:11 ခေါင်းနှစ်လုံးပါသောgရာမမြွေကြီးသည်လိုက်ဖမ်းလိုက်သည်။ မြွေဖမ်းမိသူသည် Realgar အမှုန့်ကိုဖြန်းပေးခဲ့သည်
26:49 အဆိပ်ပြင်းသောမြွေသည်နောက်တစ်ခါပြန်လာပြီး Ma Shaoyang မတော်တဆရေထဲသို့ကျသွားသည်!
36:55 Black Black Widow မရှိတော့ဘူး၊ Xiao ဟာကိုက်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်။
၄၂:၂၉ Jinglan ဟာအဆိပ်ပြင်းတဲ့ဘဝကိုသေလုဆဲဆဲ၊ Azi ကရက်ရက်ရောရောကူညီပေးခဲ့တယ်။
50:08 ညဘက်မှာနှောင်းနေသလား။ ဂျွန်ရဲကထွက်ရှာတွေ့ဖို့တံခါးကိုလိုက်ဖမ်းတယ်
59:44 Vampire လင်းနို့များသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုနိုး။ ကစားသမားခေါင်းဆောင်ကသူရဲကောင်းဆန်ဆန်စွန့်လွှတ်သည်
ku Youku APP ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါ၊ သီးသန့်ရုပ်ရှင်များသည်သင့်အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေပါလိမ့်မည်။ ♠
© YOUTUBE Youku ရုပ်ရှင်: http://bit.ly/youkumovie
© YOUTUBE Youku Variety Show: http://bit.ly/youkushow
© YOUTUBE Youku Animation: https://bit.ly/youkuanimation
© YOUTUBE Youku မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် - https://bit.ly/youkudocumentary
နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအတွက် Youku Movies Overseas Media Account ကိုလိုက်နာပါ။
Swordplay လှုပ်ရှားမှုစီးရီး: https://bit.ly/2UPbx7D
ဝတ်စုံ Romance စီးရီး: https://bit.ly/33XGGKh
MULTISUB [Big Octopus] ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းနှင့်နက်ရှိုင်းသောပင်လယ်နဂါး၏ပေါင်းစပ်ခြင်း! | လှုပ်ရှားမှု၊ စွန့်စားခန်း / ဘေးအန္တရာယ် | YOUKU MOVIE | Youku Movies
HD ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) \_ t
Билал / Билал / Мультфильм HD
Tarkov မှလွတ်မြောက်ခြင်း Raid ။ Полныйфильм။
Isla De Dos Dinosaurios-Pelicula de Accion Completa En Español
ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ВДВ "МАРШБРОСОК" Боевик, драма
[Bao Qingtian's Tomb Empty Coffin ၏သင်္ချိုင်းဂူအလွတ်] Qingtian Mingyue ကဒီကိစ္စကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးဘေးဆိုးအားလုံးကရှောင်တိမ်း! | ၀ တ်စုံ / ဆိုင်းငံစေး / သွပ်သွင်းစက် | Zheng Guolin / Chen Mengxi / Yuan Fufu | YOUKU MOVIE | Youku Movies
610 тыс. просмотров
ENGSUB [Blood Shark 1 Horror Shark] ဖန်လစ္စလင်နှင့် Zhou Weitong တို့သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ငါးမန်းဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ | သဘာဝဘေးအန္တရာယ် / သဘာ ၀ ကျမှု / စွန့်စားမှု | Fang Lishen / Zhou Weitong / Wen Dongjun | YOUKU MOVIE | 优酷电影
Воимякороля: Историяосадыподземелья / King of the Name (2006) /
Домовой / 2019 / ရုပ်ရှင် HD
Метро / 2012 / Триллер HD
စစ်ကိုင်းတိုင်း၏ Lords Fran- ရုပ်ရှင်ပြီးပြီ en Français 2013 (လှုပ်ရှားမှု, Aventure, Fantastique) 1080p
[စိတ်ကူးယဉ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ] Mermaid Bound သည် sadomasochism၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသုံးခု၏ဘုံသုံးခုဖြစ်သည်။ Full Movie | Zhang Yuxi / Zhu Zixiao
ДобрыняНикитичиЗмейГорыныч | Мультфильмыдлявсейсемьи
[Movie အပြည့်] ရေတွင်းရှိနဂါး 2, အနက်ဆုံးသောတွင်းတွင်း Sub | Fantasy Action ရုပ်ရှင် HD
187 тыс. просмотров
FullHD 1080p တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောရုပ်ရှင်သည်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည်ဇိမ်ကျလာသည်